Uncategorized | Zizawa's refuge
ဂျပန်ခေတ်တုန်းက ကာလ၀မ်းတွေကျတော့ အန်းမကိုလဲ ကူးတယ်။ စစ်ပြေးနေတဲ့ကာလမို့ ရွာက သူ့ကို သေခါနီးပြီဆိုပြီး ကွပ်ပျစ်လေးတလုံးနဲ့ ရွာပြင်ထုတ်ထားတယ်။ အန်းမက သမီးကြီးကို မွေးပြီးခါစ။ သမီးဇောနဲ့မို့ ထင်တယ်။ မသေဘူး။ သူကတော့ သူမျောနေတုန်း ၀တ်ဖြူစင်ကြယ်၊ တောင်၀ှေးနဲ့ အဖိုးကြီးတယောက်လာပြီး ငါ့သမီးမသေရဘူးဆိုပြီး လာပြောတယ်လို့ သတိရတော့ ပြန်ပြောတယ်။ တကယ်တော့ သမီးကလေးကို စိတ်မချလို့၊ မထားရက်ခဲ့နိုင်လို့ မသေတာဖြစ်မယ်။ တခါ ဆေးရုံမှာ သွေးပေါင်ချိန် သုညနဲ့တင်လိုက်ရတော့ ဒီတခါတော့ သေပြီလို့ သမီးတွေက လက်လျှော့လိုက်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အန်းမမသေဘူး။
Public relations and war by John Pilger
Posted by zizawa ⋅ 19/12/2010 ⋅ Leaveacomment
Here John Pilger demythified so-called American democracy project in Iraq. Watch it and NEVER FORGET IT!!! Pilger madeamockery of mainstream journalists and challenged the notion of BBC’s impartiality.. http://www.itv.com/itvplayer/video/?Filter=198443 For those outside UK, you can watch it on youtube. ﻿http://www.youtube.com/watch?v=egcTynu6sBk